Nsi n 'ime - ime ihe?
Nausea nwere ike ime ka ihe ọ bụla na-enye obi ụtọ gbaa ọchịchịrị. Ọbụna atụmanya nwatakịrị. Ma ụfọdụ na-ekwu na nhụjuanya bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ọ ga-adịkwa mkpa ka ọ nwee ahụmahụ, ebe ndị ọzọ na-ekwusi ike na ihe a na-adighi mma abụghị ihe dị mkpa nke nwanyi nọ n'ọnọdụ ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụdị mgbu ahụ na ndị inyom dị ime, chọpụta isi ihe mgbaàmà, ma chọpụta ma a ga-ezere ya.
Ịmata ọdịiche dị n'etiti nhụjuanya nke mmalite, nke mbụ, na nke dị ize ndụ karị, mbubreyo, na-emekpa ụmụ nwanyị ahụ n'ọkara nke abụọ nke afọ ime. Tụkwasị na nke ahụ, ndị dọkịta na-ekerịta ahụhụ ahụ na-adịghị njọ: ọkụ, ọkara na arọ.
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-amalite ịrịa ahụ n'oge ime?
Mgbaàmà mbụ nke ịṅụbiga mmanya ókè nke nwanyị nwere ike ịchọpụta ọbụna tupu ya achọta ihe nwa ahụ na-echere. Nausea, ịda mbà n'obi, ụkọ nri na mmụba nke salivation bụ ihe ndị bụ isi nke mmalite na-egbu egbu n'ime ndị ime ime, bụ nke a na-ahụ na ọ bụ obere oge mgbe a tụchara ya. A naghị aghọtacha ihe kpatara ihe ahụ, ma a kwenyere na mmalite nsí bụ "ego" nke izu iri abụọ na mbụ, mgbe a kabeghị etinyere placenta ma ghara ichebe ahụ nwanyi. Ihe ndị na-emetụta ụbụrụ nke nwa ebu n'afọ na-abanye n'ọbara, na-eme ka ịṅụbiga mmanya ókè. Tụkwasị na nke a, ọ bụ n'oge a na mgbanwe mgbanwe nke hormonal na-eme ka ọ na-eme ka ohere nke ogige ntụrụndụ na-emewanyewanye elu (ya mere ikwe ka esi esi ísì ma ọ bụ nkwụsị ụfọdụ efere). Ụfọdụ ndị dọkịta kwenyere na ihe kpatara nsogbu nhụjuanya na-akpata site n'ihe gbasara akparamàgwà mmadụ, egwu nke metụtara ọmụmụ nwa ma ọ bụ ihe ọhụụ enweghị ọchịchọ ịmụ ụmụ. Ma ọ bụrụ na ọgbụgba ahụ dị oké njọ na-eme nne gị ahụhụ, mgbe ahụ, ihe ize ndụ nke nlọghachi nke ọnọdụ ahụ dị elu karịa ma ọ bụrụ na o nweghị ihe ịrịba ama nke nhụjuanya.
Ọgwụgwọ nke nhụjuanya nke ụmụ nwanyị dị ime
Ọnwụ dị oke ma dị oke nke ịṅụbiga mmanya ókè na-edozi ọgwụgwọ. Ọmịbịa nke mbido n'ime afọ ime na mmalite nke ụbụrụ e guzobere, na ugboro ugboro (ihe karịrị ugboro 6) vomiting na-agwụ ahụ ahụ, na-ebelata ihe oriri nye nwa ebu n'afọ ma na-egbochi usoro ya. Ebe ọ bụ na a na-amanye nne na-eme n'ọdịnihu nke na-aṅụbiga mmanya ókè na-eme ka a nyochaa ya na ọgwụgwọ ọzọ na ụlọ ọgwụ.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị nro na-adịghị njọ (ugboro ugboro nke ịgba agbọ - ọ bụghị ihe karịrị ugboro 5 n'ụbọchị), ndị dọkịta na-akwado inwe ndidi na ichere oge na-adịghị mma. Ikekwe, ị ga - enweta nsị nke nhụjuanya, nchebe n'oge ime (dịka ọmụmaatụ, Hofitol, Essliver, Essentiale). Otú ọ dị, e nwere usoro ndị anwụrụ oge ga-enyere belata ọnọdụ ịda mbà n'obi.
Kedu ka esi egbochi ụkwara nta n'oge ime?
Iji malite, ọ dịghị ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ maka nsị na ime afọ. Usoro ndị na-ewere ọnọdụ na oge a dị ịtụnanya bụ otu onye. Anyị ga-enye ụzọ ndị bụ isi maka ịlụ ọgụ:
ndụmọdụ kachasị mma: enwere mgbe mgbe, mana ntakịrị. Ndị di bụ oge igosi na ị hụrụ gị n'anya ma na-enye gị nri ụtụtụ na bed. Iri n 'ebe kwesiri ntukwasi obi ga - enyere aka izere ututu nke ubochi na afo efu;
kwa awa abụọ na-edozi nri nri. Na-abụkarị "ndị na-aṅụ ara", mkpụrụ nke salted salted, pieces of lemon or thelon, mint candies "help";
Na-aṅụ (mana iche iche na nri!). Mmiri mmiri alkaline kwesịrị ekwesị, Mint ma ọ bụ ginger tii;
gaa ije n'èzí;
ya na mmụba dị ukwuu ma ọ bụ mmegide nke ọgbụgbọ, ọnụ mmiri na mint ma ọ bụ ọka breeze;
Ọ bụrụ na ọgbụgbọ ahụ meriri na mgbede, ma eleghị anya, ọ bụ ihe mgbaàmà nke ịrụ ọrụ. Kwe ka onwe gi zuo ike ma dina ala.
Ọ dị ezigbo mkpa na ndị ikwu gị ga-abanye n'ọnọdụ gị ma gbalịa ịjụ iji mmụọ na-ewe iwe, ise siga, na nri, isi ya na-akpata mmetụta ndị na-adịghị mma. Mmetụta nke ndị ị hụrụ n'anya ga-enyere aka belata ịda mbà n'obi ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe nke oge, àgwà maka oge a. Dị ka a na-achị, nkwụsị nke mbụ na-akwụsị mgbe e guzobere placenta - site na izu iri na isii, ọnọdụ ahụ kwesịrị ịkwado.
N'ihu ime ahuhu na ime ime - ihe ime?
Nke a bụ ihe a na-ahụkarị, nke, dịka ịmalite ịṅụbiga mmanya ókè, na-ejikarị ụzọ ndụ na-ezighị ezi nke nne nne na-amalite ma ọ bụ ụfọdụ ọrịa (ọrịa obi, akụrụ, ọrịa endocrin, ibu oke). A na-anụkarị okwu ahụ bụ "gestosis" (nsí nke ọkara nke ime ime) nke nwanyị na-ahụ maka onye gynecologist nụrụ. a naghị egosipụta mgbe ọ bụla nke ime nke abụọ nke afọ ime (mgbe izu 34 gasịrị) mgbe niile na ọgbụgba na ịgba agbọ. Mgbagwoju anya nke ajuju bu na mgbe ufodu a ga-ekpughere ihe omuma nani mgbe ichoputara: nzepu zoro ezo ma obu ihu protein n'ime urine. Ihe si na ya pụta bụ agụụ na-ekpo ọkụ nke nwa ebu n'afọ, ụkọ nri dị mkpa. Ya mere, ọ bụrụ na dọkịta ahụ ekwusi ike na ụlọ ọgwụ, ajụla.
Ọ bụ ezie na nchoputa dị mma igbochi, ya mere ịgbochi bụ ndụmọdụ kachasị mma maka nwanyị dị ime. Nke a bụ ụzọ e si ezere nsí nsị n'oge ime ime:
na-etinye aka na ọchịchọ anụ ahụ na mmalite nke ịtụrụ ime, na-ewe iwe ọkụ gị n'etiti okwu ahụ. Ghota nri di nma ma obu nnu, wezuga ihe anwuru. Lelee ibu arọ (mmụba ahụ ekwesịghị ịfe 400 g kwa izu), na-atụle nrụgide mgbe niile;
gbalịa iji nwayọọ nwayọọ na-ehi ụra, zuru ike, tinye oge n'elu ikuku;
ịṅụbiga mmanya ókè na ọkara nke abụọ nke afọ ime nwere ike ime ka edema ederede. Ọ bụrụ na ị chọpụta na akpịrị ịkpọ nkụ na-arịwanye elu, ọnụ ọgụgụ mmamịrị na-egosikwa na ọ dị ntakịrị karịa mmiri nke mmiri na-egbu - nke a bụ ihe ngọpụ igosi dọkịta;
ihe ọṅụṅụ ọṅụṅụ nke mkpụrụ osisi mịrị amị, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ịrịba ama nke pyelonephritis - jiri kranberị ihe ọṅụṅụ.
Ma ọ bụrụgodị na etinyere gị na ụlọ ọgwụ, echefula ihe mere ị ji eji ụbọchị gị na ngalaba. Egela "akụkọ egwu" nke ndị ọrịa ọzọ, lekwasị anya na obi ụtọ na-echere gị n'oge na-adịghị anya. E kwuwerị, ezigbo ọnọdụ na ịhụnanya bụ ọgwụ kacha mma!
Ịgba akwụna na ime ime
Uche mgbe imechara nwa
Kedu ọgwụ ọjọọ na-eme ime ọpụpụ?
Ọkpụkpụ nwa ebu n'afọ
Bioparox n'oge ime
Kedu oge ndị primiparas na-amụ nwa?
Itinye embrayo aka na akpanwa - ihe ịrịba ama
Ụjọ nke ịmụ nwa
Ime afọ iri abụọ na abụọ - gịnị na-eme?
Ọkụ nke ụkwụ n'oge ime
Kedu ka esi tụọ ọnụ nwa ebu n'afọ?
Nchịkọta nke placenta
Achịcha na kabeeji na mushrooms
Brooklyn Beckham kwuru na ibi na ezinụlọ kpakpando siri ike
Kedu otu esi emeso onye dị afọ iri na ụma?
Sprouted buckwheat - ọma na ihe ọjọọ
Kedu ihe iji esi nri na celery?
Nnyocha e ji egbuke egbuke
Kedu akpụkpọ ụkwụ dị na ejiji maka 2015?
Ọla edo ọla ntị na Swarovski kristal
Currant na-agbanye na mmiri
Novodevichy Convent na St. Petersburg
Ọrịa cancer na-agwọ ọrịa na-egbuke egbuke
Cocoa "Nesquic" - ọma na ihe ọjọọ
Pentagram nke ekwensu
Ụmụnna iri atọ, ndị ị na-echeghị
Nlekọta ụlọnga maka nsị
Artificial nkume maka facade